Goor dhowayd waxaan joogay xaflad (Waxaan ahay gabar, 16 sanno jir ah) kadibna ‘waan suuxay’. Ma garanayo waxa dhacay. Laakiin ma aanan cabaynin khamro mana qaadanin wax daroogo ah. Maxay sidaan u dhacday?
Du bist hier: Startseite / Goor dhowayd waxaan joogay xaflad (Waxaan ahay gabar, 16 sanno jir ah)...
Suuxdinta ama miyir daboolanka waa wareerid.
Macnaheedu waxay tahay: adigu ma oggid waxa dhacay.
Xitaa haddii aadan hurdaynin.
Waxaa dhici karta in ay gabdhaha saaxiibadaada ahi ay ogyihiin waxa adiga kugu dhacay.
Ku biloow in aad ayaga weydiisid.
Kadibna waxaad u baahantahay in aad dhakhtar la kulantid.
Ayaga ayaa oggaanaya haddii aad xanuunsantahay iyo haddii kale oo aad fiicantahay.
Sidoo kale waa suurtogal in qof cabitaanka wax kuugu daray.
Daroogooyinkaan inta baddan waxaa loo yaqaanaa sida ‘suuxiyayaal’.
Malahan wax dhadhan ama ur ah.
Waxaa si qarsoodi ah loogu dari karaa cabitaanka.
Kadibna waxaad dareemaysaa awood la’aan, caawimaad la’aan ama sidii adiga oo aan waxba qaban karin.
Hadhowna, waxaa kugu dhacaya in aad miyirkaaga weyso; suuxdin.
Arintaan waxaad kala hadli kartaa dhakhtarkaaga.
Sidoo kale ayadu waxay kuu soo jeedinaysaa qof aad la hadli karto.
Waa cabsi in aadan garanaynin waxa kugu dhacay.
Fadlan raadi caawimaad.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-09-29 12:29:232017-09-29 12:29:23Goor dhowayd waxaan joogay xaflad (Waxaan ahay gabar, 16 sanno jir ah) kadibna 'waan suuxay'. Ma garanayo waxa dhacay. Laakiin ma aanan cabaynin khamro mana qaadanin wax daroogo ah. Maxay sidaan u dhacday?